နံရံထက် ခုံတန်းလျားထက်မှလက်ဆော့စာ(ခံစားချက်များ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » နံရံထက် ခုံတန်းလျားထက်မှလက်ဆော့စာ(ခံစားချက်များ)
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Dec 20, 2011 in Photography | 18 comments
ကိုပေါက်ရဲ့ စနက်ရှော့ မဟုတ်
1 မန်းတောင်ခြေ မှာတွေ့ရတာပါ အရှေ့ဖက်စောင်းတန်း လူအသွားနည်းပါတယ်
2 သူကလဲမန်းလေးတောင်အတက် တစ်နေရာထဲမှာတွေ့တာပါ
3 ဒီစာလေးကတော့ သံတိုင်အောက်ခြေမှာရေးသွားတာပါ
4 သိပ်မကွာသေးခင်မှာဖြစ်သွားတဲ့ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ပေါ့ သူမလာတော့ အတော်ခံစားသွားရမယ်ထင်ပါတယ်
5 ဒီစာလေးကတော့ ရောက်ကြောင်းသတင်းပို့ရုံသက်သက်
6 မြင်းခြံမြို့က လူရဲ့ မှတ်တမ်းလေး
7 2008 ဆုိုတော့ သိပ်မကြာသေးဘူး
8 ဒါကတော့ မိသားစုလိုက်ကလေး လာသွားတာလေ
9 ရေးထားတာတော့ ပွစာတက်နေပါတယ်
10 ရေးတာကတော့ ပွစာတက်နေအောင်ရေးကြတာပါဘဲ
11 ဒါကတော့ အချစ်ကြိးသူတစ်ယောက်ရဲ့မှာတမ်းလေးပါ
ဒါကတော့ မန်းလေးတောင် ဘိုးဘိုးကြီးနန်းနားကလှေခါးကနေတက်လိုက်ရင်မြင်ရတာပါ။
ဒီနေ့ရွှေကြက်ယက်ရောက်တော့လဲ ထပ်ရိုက်လာသေးတယ် တင်ပေးအုံးမယ်နော်။
မန်းတလေးတောင် အရှေ့ ဘက် စောင်းတန်း တဲ့ ။ အဟွတ် အဟမ်း
သေချာပါပြီလေ ၊ ဓါတ်ပုံ မှတ်တမ်းကောင်းများစွာ
တင်ဖို့ ကျန်နေသေးတယ် ဆိုတာ
ခွင့်ခါ ရခဲ့မယ် ဆိုရင်ပေါ့
တော်ပါသေးရဲ့ ဒို့စာတွေကိုပေါက်မမြင်သွားလို့ နို့မိုဆို ရှက်စရာကြီး :green
ဥပုဒ်နေ့က ညနေစောင်း အစက ကျုံးပါတ်ပါတ်လည်ကနန်းမြို့ရိုးတွေကို လိုက်ပြီးရိုက်နေတာ။
အဲဒီတောင်ခြေမှထမင်းဆိုင်ဖွ့င့်ထားတဲ့ အသိကောင်လေးလဲတွေ့ရော သူဆိုင်မှာ ဆိုင်ကယ်ထား။
စန္ဒာမုနိ တို့ ကျုံးတို့ ကုသိုလ်တော်တို့အဝေးကမြင်ကွင်း။
ဒီနေ့ရွှေကြက်ယက်ကို အလုပ်ကိစ္စနဲ့ရောက်တော့ ဘုရားပေါ်တက်ပြီး တ၀ကြီးရိုက်ခဲ့ပါတယ်။
မမရေ ကိုပေါက်က မျက်စိဆော့ လက်ဆော့ ဒါပေမယ့် ပါးစပ်တော့ မဆော့ပါဘူး။
တော်ကြာ ကိုပေါက်ရဲ့ လက်ဆော့ထဲမှာ
သူများတွေများပါချင်လွန်းလို့မှ ကင်မရာရှေ့လာလာရပ်ကြတာပါ မောင်ကင်းရယ်၊
ကျွန်တော်တို့ ရန်ကုန်မှာ Mr Guitar ဆိုတဲ့ဆိုင်အ၀င်ဝမှာ
ကျွန်တော် ဖတ်ပြီး အရမ်းကြိုက်တဲ့စာသားလေးတွေရှိတယ်ဗျ။
တွေးတတ်တာနဲ့ တင် လက်ခုတ်တီးပါတယ်ဗျာ။
ကျနော် မေမြို့ကိုရောက်သွားတော့ ရုက္ခဗေဒ ဥယျာဉ်ထဲက သစ်တောလျှောက်လမ်းကိုသွားတာ။
အဲဒါကနေအစပြုပြီး ရောက်တဲ့နေရာက လက်ဆော့စာတွေကို မှတ်တမ်းတင်လာခဲ့တာပါ။
ဒီတခါ ကျိုက်ထီးရိုးသွားရင် ကျောက်တုံးကြီးတွေပေါ်မှာ ရေးထားတာတွေ ရိုက်ခဲ့ဦးဗျာ
ပုံပြင်လေးတွေ… မှတ်တမ်းလေးတွေ… ဇတ်လမ်းလေးတွေ… နော
ခင်လို့ အိပ်ရေးပျက်ခံပြီး ရှည်လျားထွေပြားစွာ မန့်လိုက်ဦးမယ်လို့စဉ်းစားမိသပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော့်အလုပ်ချိန်တွေကိုလဲ လေးပေါက်ကို ကြုံတုန်းပြောပြပြီးပါပြီ။ အားတဲ့အချိန်လေးတွေကိုတော့ ဒီဆိုက်ကို ၀င်မကြည့်ပဲ မနေနိုင်လို့ ၀င်ဖတ်ရင်း အချိန်တွေ ဖြုန်းမိနေသပေါ့လေ။ ဆိုတော့ လိုရင်းကိုဆက်မယ်.. မတူတဲ့ အတွေးလေးတွေနဲ့ ချရေးတာပေါ့ (သူကြီးကိုဖားတာ )
ခေါင်းစဉ်မှာပေးထားတဲ့ လက်ဆော့စာ ဆိုတာနဲ့တင် ရပ်သင့်တဲ့အနေအထားပါ။ (ခံစားချက်များ) ဆိုတာကတော့ မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုးတွေ အတော်လေး စည်းကမ်းမရှိတာကို အားပေးအားမြှောက်ပြုတာ မြင်မိတယ်။ ကြုံလို့ပြောရမယ်ဆိုရင် မြန်မာပြည်ပြန်ရောက်တုန်းက Moon Bakery ၊ ၃၇ လမ်းနဲ့ ၃၈ လမ်းကြားက ဆိုင်လေးကို ရောက်မိတယ်ပေါ့လေ။ အပေါ်ထပ်ကို။ အဲဒီမှာ ဘာဝမ်းနည်းစရာ သွားတွေ့မိလဲဆိုတော့ အဲဒီဆိုင်နံရံတစ်လျှောက် Correction Pen တွေနဲ့ ရေးထားတဲ့၊ လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ မြောက်မြားလှစွာသောစာတွေပါပဲ။ အဲဒီ Moon Bakery က ဆိုင်နံရံတွေ၊ ကြော်ငြာလက်ကမ်းစာတွေ၊ Venyl တွေကို တစ်ချိန်က ကျွန်တော်အပါအ၀င် သူငယ်ချင်းတစ်စု တာဝန်ယူလုပ်ကိုင်ပေးခဲ့ရဖူးတယ် (ကျွန်တော် Graphic Designer ) ဆိုတာ ဖတ်ဖူးရင် သိမယ်ထင်ပါတယ်။
ဆိုင်ပိုင်ရှင်က ကိုရီးယားမ၊ သူယူထားတာက မြန်မာပြည်ဖွား ပြည်မကြီးသား။ သူက မဖျက်ဘဲထားတာကို သဘောကျလို့ထားတယ်ထင်ပြီး ထပ်ရေးကြသူတွေလဲ ရှိမယ်ထင်တယ်။ တစ်ကယ်တော့ သူက ဆိုင်နံရံတွေကို ဆန်းဆန်းပြားပြားလေးနဲ့ လှနေစေချင်တာ။ အဲလိုတွေမြင်ရတော့ သူအလှဆင်ထားတာတွေ ဖျက်နေမယ့်အတူတူ ထားလိုက်တော့ဆိုပြီး ထားတယ်လို့ထင်တယ်။ အဲဒီလိုနံရံပေါ်က စာပေါင်းစုံကို မြင်မိတော့ အဲဒီကိုရီးယားမကို တွေ့ဖို့ အတော်လေး ရှက်မိသွားတယ်ဗျာ။ ဒါဟာ ဘာကိုပြသလဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုးတွေ စည်းကမ်းမရှိတာကို ပြနေသလိုပဲ။ မယုံရင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ထဲက သစ်ပုပ်ပင်ကြီးသွားကြည့်၊ ရေးထားလိုက်ကြတာ၊ ရေးလွန်းကြလို့ သံဇကာတောင် ခတ်ထားရတဲ့အဖြစ်ကိုကြည့်။
အဲဒီဟာတွေက အသေးအဖွဲတွေလို့ ထင်ရပေမယ့် ရန်ကုန်တစ်ခွင် ပြဲပြဲစင်အောင် လိုက်ကြည့်၊ ကားမှတ်တိုင်တွေကခုံတွေ အကောင်းအတိုင်းရှိတာ ဘယ်မှာတွေ့သလဲ၊ ကြော်ငြာဘုတ်တွေ ဘယ်နေရာ အကောင်းအတိုင်းကျန်လဲ၊ တစ်ချိန်က အမှိုက်ပုံးတွေထားပေးတာ ဖြုတ်ယူသွားကြလို့ ခုဆို မထားတော့တာ စည်ပင်အပြစ်လား၊ လိုင်းကားတွေကခုံတွေကို ဓါးတွေနဲ့ ဖြဲတာ ဘယ်သူတွေလဲ? အဲဒါတွေကို ခုလို လေးပေါက်လို ဓါတ်ပုံတွေနဲ့ သတင်းလိုလို၊ ရသလိုလို တင်ပြနေသူအတွက် ကောင်းသောရှူထောင့်တစ်ခုကနေ ပြင်ဆင်သင့်တာလေးတွေအနေနဲ့ ထောက်ရှူပြောဆိုမယ်ဆိုရင်တော့ ပိုမိုကောင်းမွန်သင့်တော်မယ်ထင်ကြောင်း…
ကျွန်တော်ပြောတာတွေလွန်တယ်ထင်ရင် နိုင်ငံတစ်ကာနဲ့ယှဉ်ပြီးလေ့လာကြည့်ပါ၊ ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေ ကောင်းစားစေချင်လို့ ခုလို အမုန်းခံ ထောက်ပြတယ်ပဲမှတ်ပါတော့။ ပြောစရာရှိတာတော့ ပြောရမှာပဲ။
မလွန်ဘူးကိုရှူံးရေ ပြောသာပြော ထောက်ခံတယ်
ရှေ့ဆုံးမှာထိုင်တဲ့သူကမရှိသလောက်ဆိုတော့ ကိုယ်ပိုင်နေရာလိုဖြစ်နေတော့ စာရေးခုံမှာ correction pen နဲ့လက်သရမ်းထားတာတွေဆို အကုန်ဖျက်ပစ်တယ်
လက်ဆော့သူတွေ အတွက် ကော်မတီဖွဲ့.. တခါ လက်ဆော့ ၁၀၀၀၀ ဆိုပြီး ဆေးပုံ တပုံနဲ့ ပြန်သုတ်ခိုင်း.. မြို့တော်ကြီးလည်း အလှဆင်ပြီးသား ဖြစ်တယ်။
ဒါနဲ့ စကားမစပ်.. အိမ်သုတ်ဆေး ထုတ်တဲ့ ကန်ပနီ ထောင်မလားလို့.. အဲဒီ ပရောဂျပ်မျိုးရှိရင် လက်တို့ပါအုန်းနော်။
အောင်မယ်ငီး ဘီတူရီးဒုံး လို့ ….
ဂက်တူဆိုကြီးပါလား … ဆုံလည် ဂန်း ကြီးနဲ့ကို အပြွတ်လိုက် ဆွဲနေတာ …
ရိသဲ့သဲ့ လုပ်ချင်တဲ့ သူတွေ စချင်နောက်ချင်တဲ့ သူတွေကို အပြွတ်လိုက် ဆွဲပြီး ဒလစပ် ပစ်နေတာ သိပြီလား.. လူက အားနာပေမဲ့ သေနပ်ကတော့ အားမနာဘူး.. တခါတည်း ပစ်ပလိုက်မယ် ဘာမှတ်နေလဲ.. ဟွန့်…. အမောင်ဂိ တောင် ဖားကလေး မလှုပ်နိုင်လို့ အမှောင်ထဲမှာ ထိုင်နေရတုန်းပဲ မလား.. ငှင်းး ငှင်းး ငှင်းးး..
အဲတော့ ရေးချင်ရှာသူကို မရေးနဲ့ကွာလို့ပြောမယ့်အစား
ကောင်းရင် သူကြီး ရေ အကောင်အထည်ဖော်လိုက်ရအောင်………
ဟင် သူများတွေ မန်းလေးက လက်ဆော့စာတွေ